ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်များ | Pyithu Hluttaw - ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Law Database | Mail | English Version
ကော်မတီ / ကော်မရှင်များ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးလှမြင့်ဦး သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံတမန်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးလှမြင့်ဦးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းအီတလီသမ္မတနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့မှ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
(၈)ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ ပါလီမန်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အတွက် အီတလီသမ္မတနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသံရုံး၌ သံရုံး မိသားစုများအား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပြီး ဒေသစံတော်ချိန် (၂၂၀၅)နာရီ အချိန် တွင် ရောမမြို့၊ FIUMCINO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်နောင်နှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများက ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း အီတလီနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွေ့ဆုံ
အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အောက်တိုဘာ ၇ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် အီတလီနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Ms.Lauara BOLDRINI နှင့် အောက်လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၌ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်း (၈)မြောက် အာရှ-ဥရောပပါလီမန် ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့၊ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ Nuova Aula dei Gruppi ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် (၈)ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ ပါလီမန်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက် အစည်းအဝေး၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
(၈)ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ ပါလီမန်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ သို့ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အောက်တိုဘာ ၆ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၌ အီတလီနိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr.Pietro GRASSO နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့သို့ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းသည်အီတ လီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့၌ ကျင်းပမည့် (၈)ကြိမ်မြောက်အာရှ- ဥရောပပါလီမန်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အစည်း အဝေး တက်ရောက်ရန်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဦးဝင်းမြင့်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံးနှင့်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းလာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့်စစ်သံရုံး မိသားစုများအားတွေ့ဆုံ
(၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ တက်ရောက်ရန်အတွက် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၁၇ ရက် နံနက်ဒေသစံတော်ချိန် ၉နာရီ၁၅မီနစ်တွင် လ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အာဆီယံပါလီမန်းများ ညီလာခံ ကော်မတီအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀၀ နာရီအချိန် Donchan Place Hotel ၌ ပြုလုပ် ကျင်းပလျက်ရှိသော (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ၏ ကော်မတီအစည်းအဥေးများဖြစ်ကြသော Committee on Political Matters အစညး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း လာအိုပြ ည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသော ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သည် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၁၉၀၀ နာရီအချိန်တွင် National Convention Center ၌ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရစ်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ သို့တက်ရောက်
(၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို DONCHAN PALACE HOTEL ၌ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ နာရီအချိန်တွင် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများက AIPA တေးသီချင်းများသီဆို၍ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် လာအ
© 2012 Pyithu Hluttaw | ပြည်သူ့လွှတ်တော်